Humidifier vs Diffuser - Ngwongwo mgbasa ozi maka mmanụ dị mkpa | AromaEasy
Ihe na February 9, 2020 June 22, 2020 by Aromaeasy
Anyị na-enwetakarị ajụjụ site n'aka ndị ahịa dịka, m ga - enweta diffuser ma ọ bụ iru mmiri na kedu ihe dị iche na abụọ?
Ọtụtụ ka na-eche na ha bụ otu ihe.
Agbanyeghị, ikuku dị ala nwere ike inye aka na-esi ísì ọma n'ụlọ gị? O nweghi ike, mana iji ọgwụ mgbasa ozi, ị ga - ete mmanụ ikuku dị mkpa ma mee ka ụlọ gị na - esi ísì ọma.
Edemede a jiri ha abụọ kọwaa ọdịiche ha, uru na ọghọm ha ka ị mata nke dị mma maka gị.
Gịnị bụ Diffuser?
Maka ebumnuche aromatherapy, ejiri mmanụ dị iche iche jikọọ ọnụ.
Ihe dị mkpa mkpa mgbasa mmanụ vaporized mmanụ dị mkpa, yabụ enwere ike ịgbasa isi ísì ígwé.
Ndịiche dị iche iche dịgasị iche iche, n'ụdị ha, na nha ha. Ndị na-eme nchọpụta dị iche na ndị na-akụ mmiri dị iche iche n'ihi na e mere ha kpọmkwem ka ịgwakọta mmanụ dị mkpa na mmiri n'ime ite mmiri wee kewapụta ya.
Anọ ụdị mmanụ dị iche iche dị mkpa n’ahịa:
Ultrasonic (Ultrasonic Omume ọma jijiji)
Ebe obibi (Ifufe / Fan)
Nebulizer (Force / Atomization)
N'ikwu okwu, a na-emebe ndị na-enye ihe dịgasị iche iche iji wepu ihe mmachi nwere mmanụ dị mkpa na-eme ka mpaghara ime ụlọ ahụ ka mma.
Uru nke Diffusers
N’enye uzo oma esi eji mmanu mmanu mee ihe n'uju
Dabere n’ụdị mmanụ ị na-eji, alụlụ ahụ i ji ajị anụ ahụ nwere ike ime ka obi tọọ gị ụtọ.
Greatzọ kachasị mma iji wepu isi na obere ihe na-adịghị mma, na-eme ka ụlọ gị na-esi ísì ọma.
Igwe nju oyi na-esite na onye na-enye ihe dị n’ọkụ pụrụ ime ka ikuku dị ọcha ma mee ka ọ dị ọcha, belata nje ndị na-emekarị
Onye na-agbanwe ya nwere ike inye aka na snoring n'ihi na ọ na - eme ka ikuku ikuku na - eku ume mgbe ọ na - ehi ụra.
Onye na-ahụ maka mmiri na - arụ ọrụ dị ka obere mkpirisi mmiri, na - enyere gị aka iku ume nwayọ n'oge ọkọchị.
Researfọdụ nyocha mere gosiri na onye na - agbasa ya nwere ike belata otu ụdị nje na ero n’ụlọ. Mmanụ ndị dị mkpa nwere ihe mgbochi antifral, antifungal, na antioxidant. Ọ bụ ya mere na diffusers nwekwara ike belata ọnụ ọgụgụ nke nje na ero n'ime ụlọ, ya mere na-egbochi nsogbu ahụike.
Dabere na mmanụ ndị dị mkpa, ha na-asacha ikuku ị na-eku ume ma na-eme ihe ị na-achọ, nke nwere ike ịbụ site na ime ka uche gị dajụọ ma nyere aka ihi ụra, belata nchekasị na nchegbu.
Rịba ama na ị ga-erite uru naanị mgbe ị ga-enye ndị na-eso ụzọ gị ohere iji ihe ziri ezi mkpa mmanụ.
Cons nke Diffusers
Dị ka ọ na-adịkarị, ndị na-agbasa ozi nwere obere mmiri mmiri karịa nchekwa.
Typesfọdụ ụdị mgbasa ihe nwere ike ịdị ụzụ.
Ndị na-enye nsogbu na-achọ mmiri mmiri chọrọ, maka uru kachasị mma maka ahụike gị.
Ihe nrụpụta kachasị mma na-akwụkarị ụgwọ dị ukwuu, mana mgbe ejiri ya nke ọma yana mkpa, ọ bara uru mgbe niile.
Ọ chọrọ nhicha ọcha kwa ụbọchị,
ị nwere ike click ebe a ka ichoputa otu esi ehicha diffuser
Gịnị bụ Humidifier?
Ihe nhicha mmiri bu igwe di uku ma gha emebe idebe oke onunu n’ime ulo ulo. Ndị ihu ala na-enyere ndị nwere nsogbu aka n'oge ihu igwe na-adịghị. Ọtụtụ na-eji otu na-agwọ mgbaàmà nke oyi, flu, na mkpọchi afọ.
Humidifiers dị iche na ndị dị mkpa mmanụ na-emekpa ihe ka ukwuu: Ọtụtụ n'ime ihu igwe dị na ahịa taa anaghị akwado ịgwakọta mmanụ dị mkpa maka ikesa ikuku. N'ihi na ọtụtụ ndị na-ebu mmiri n'ahịa nwere ihe mejupụtara plastik, ha na mmanụ ekwekọghị ekwekọ.
Onye na-ahụ maka mmiri ga - efesasị mmanụ gị dị mkpa, nke na - eme gị ọ kachasị mfe ịbanye ya na ahụ gị iji banye ya. Ihe na-eweda mmiri ala anaghị arụ ọrụ n'otu ụdị.
Mara na anaghị atụ aro ya iji mmanu di nkpa.
Uru nke Humidifiers
Na-emeso ikuku nkụ site na ịgbakwunye mmiri n'ụdị alụlụụ ọkụ.
Site na ịtinye mmiri mmiri, apịtị na-erite uru nke imi.
Ọ na - enyere aka na nsogbu iku ume, na - eweta enyemaka maka ndị na - arịa ụkwara ume ọkụ na allergies.
Igirigi mmiri nwere ike iji mmiri pọmpụ rụọ ọrụ.
A na-eji udu mmiri eme ka mmiri dị n’ikuku. Site na ịhazi iru mmiri dị na ikuku, ha na-enyere gị aka iku ume nke ọma ma belata nkụ. Ọzọkwa, Humidifiers nwere ike belata ihe ndị metụtara iku ume ma ọ bụ ihe mgbaàmà ndị yiri ọrịa, wee belata ihe mgbaàmà oyi site na ibelata nkụ na iwe nke imi na akpịrị. Ọ na - agbakwunye mmiri na ikuku iji mee ka akpụkpọ ahụ na akpụkpọ ahụ nweta mmiri dị mma.
Ego kwesịrị ekwesị n’ebe obibi gị nwekwara ike ịdị ogologo ndụ nke ihe owuwu ahụ.
Osisi kpọrọ nkụ nwere ike ịkwụsị ọdịdị ya ma mee ka usoro ịka nká dị. Ọdịmma nke mmiri kwesịrị ekwesị na-enyere aka igbochi ite nke arịa ụlọ.
Cons nke Ndị na-eme ihere
Achọrọ nhicha na mmezi kwa ụbọchị.
Edeghị ya iji mmanụ mmanụ dị mkpa eme ihe: humidifier nwere ike gbarie ma ọ bụrụ na eji mmanu arụ ọrụ.
Humfọdụ ndị ihu mmiri na-eme mkpọtụ mgbe ha na-arụ ọrụ.
Enweghi ike na obere oghere: oke mmiri nwere ike imebi ime ụlọ gị.
Unitsfọdụ nkeji, ọkachasị ndị na-ahapụ alụlụ ọkụ adịghị mma ma ọ bụrụ na ịnwere ụmụ na / ma ọ bụ anụ ụlọ:
Mmiri na mmiri n'ime humidifier nwere ike ịdị ize ndụ ịhapụ naanị ya.
Imirikiti ihe ihu igwe nwere ihe ndozi eji arụ ọrụ maka igbochi nje bacteria ma ọ bụ igwe na mmiri. Yabụ na ọ ga-abụ mmiri na-ezighi ọcha iji hichaa akụkụ niile. N’etinyeghị ya nke ọma, ihe na - echicha mmiri na - aghọ ebe ahịhịa na ahịhịa, ebe ana - ahapụ ikuku iji banye n’ahụ anyị. Wantsnye chọrọ nke ahụ n'ezie?
Kedu ihe kpatara na agaghị m eji mmanu mmanu? / Enwere m ike itinye mmanụ dị mkpa na mkpirisi
Imirikiti ndị na-eme ihu mmiri (ma ọ bụ uzuoku ma ọ bụ oyi alụlụ) emeghị ka ọ vapori mmanụ dị mkpa. Enwerekwa ịdọ aka na ntị ka ịghara itinye mmanụ dị mkpa ozugbo esite na mmiri n'ihi na mmanụ ndị a ga-emechi ma ọ bụ mebie iru mmiri. Mmanụ ndị dị mkpa, karịsịa ndị nwere citrus, nwere ike ịkụda ihe ndị dị na plastik a, na-ebute ya Mbelata ike mmanụ dị mkpa.
Ọzọkwa, mmanụ ga - eme ka mmebi nke akụkụ ahụ kpụrụ akpụ ma ọ bụ nke sịntetik dịka roba, plastik, na nzacha. Ma nke a nwere ike ibute nrụrụ ụlọ, nke nwere ike igbochi asọpụta ma belata arụmọrụ ala ala. Ọ bụrụ na -achọghị mgbidi ọ bụla, ọ nwere ike mechaa kụọ ọkụ.
Ọzọkwa, nsogbu kasịnụ bụ na plastik ndị ahụ nwere ike ịgbari na mmanụ wee gbasaa ikuku, na-ebute mbibi ahụ ike gị.
O di nma inweta mmanu mmanu di nkpa nke edebere iji kesaa mmanu di nkpa n’agha.
Ugbu a, ị mara ihe dị iche n’etiti onye na-akpachapụ ihe na onye na-enye ihe ala.
Ma ị na-anwa ịda mbà, nyere gị aka ịlụso ọrịa ọgụ, ma ọ bụ belata nkụ, ndị na-enye nkọwa na ndị na-enye ihu mmiri na-eweta ọtụtụ uru iji belata ahụhụ n'oge oyi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwelata ikuku ma zuo ike na aromatherapy mgbe ụlọ, ihe nkesa mmanụ dị oke mkpa bụ maka gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ị ga-esi na-ekesa mmanụ dị mkpa na ikuku, anyị na-akwado ịhọrọ onye diffuser ka ọ bụrụ ihe eji arụ ọrụ nke ọma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na gị na ndị ọzọ na-ekerịta oghere gị, humidifier nwere ike kpuchie nnukwu ohere achọrọ iji wedata ya.
Maka newbies, anyị ga-akwado mmanụ diffuser dị mkpa.
N'ihi na ọ nwere ike inye gị ọgwụ aromatherapy, yana ọ na - arụkwa ọrụ dị ka obere ihe na - echicha mmiri ruo n'ókè ụfọdụ.
Sọsọ ọ bụla ị họọrọ ịzụ, jide n'aka na ị nyocha ma uru na ọghọm dị na ngwaọrụ ahụ. Can nwere ike ịga leta nke ọzọ Blọọgụ ịchọpụta ihe ndị ahịa ndị ọzọ na - achọta mgbakwunye kachasị mma na ụlọ ha.
Diffuser vs Candle Truth Eziokwu 5 You Na-Maara Ma Ma But Kwesịrị